Fantaro i Adéṣínà Ayẹni, mpitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang manomboka ny 27 marsa ka hatramin’ny 2 avrily · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Adéṣínà Ayẹni, mpitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang manomboka ny 27 marsa ka hatramin'ny 2 avrily
Voadika ny 28 Marsa 2019 5:02 GMT
Sary natolotr'i Adéṣínà Ayẹni.
Mandritra ny taona 2019 ary ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny antserasera, hifandimby ny Afrikana mpikatroka ara-piteny sy ireo mpanandra-teny amin'ny fitantanana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainan'izy ireo amin'ny famelomana indray sy amin'ny fampiroboroboana ny fiteny afrikana. Hiresaka momba an'i Adéṣínà Ayẹni AKA Ọmọ Yoòbá (@yobamoodua) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity ny lahatsoratra.
Mpanao gazety sy mpanandrateny ara-kolontsaina mandray ny asa fampiaraha-monina ny fampitam-baovao amin'ny alalan'ny fikajiana, ny fampielezana ary ny fampitana ny vakoka ara-kolontsaina Yorùbá na antserasera na andavanandro i Adéṣínà Ayẹni fantatra ihany koa ho Ọmọ Yoòbá. Amin'ny fananany feon'artista, efa tsy voaisa intsony ny dokambarotra amin'ny fiteny Yorùbá hanaovany fanentanana radio sy TV ho an'i Nizerià. Izy no mpanorina ny Vakoka Ara-Kolontsaina Yobamoodua, sehatra natokana hampielezana ny fiteny sy ny kolontsaina Yorùbá. Mpitantana lingua ao amin'ny habaka Global Voices Yorùbá ihany koa i Ọmọ Yoòbá. Izy ny mpampianatra ny fiteny Yorùbá ao amin'ny tribalingua.com ampianarany mpianatra manerana izao tontolo izao. Miasa miaraka amin'i Localisation Lab, fokonolon'ny mpandika teny sy mpampiasa farany, mpandrafitra antserasera ary ireo mpanelanelana miara-miasa handika sy hamangitra fiarovana nomerika sy fitaovana fanivahana, ihany koa izy.
Ọmọ Yoòbá dia efa nanoratra boky mitondra ny lohateny hoe: Ẹ̀yà Ara Ẹ̀dá Ọmọ Ènìyàn, fitambaran-tsary fanazavana ny fari-batana sy ny fiavian'ny teny sy ny raokandro miasa mahatalanjona amin'ny isaky ny faritra ami'ny vatana. Mpikaroka sakaiza ao amin'ny Firebird Foundation for Anthropological Research ihany koa izy.
Voalohany, mifangarika amin'izay hita an-tserasera ny fahalianana ny fiteny Yorùbá raha oharina amin'ny andavanandro, satria maro ireo mpiteny azy no nandao ny tenin-drazany, tsy te-ho tafaraka amin'ny fiteny ry zareo.
Na dia nisy asa ny fisongàna amin'ny fisian'ny mpampiroborobo ny fiteny an-tserasera dia tsy resahana ny fandraisana azy. Etsy ankilany, tsindraindray no miteny aminy ny olona, na dia ny ray aman-dreny aza tsy mandrisika ny zanaka naterany hifandray amin'ny fitenin-drazany. Tsy tsara izany amin'ny fampivelarana ny fiteny. Tsy hafa amin'ny satany an-tserasera ny satany andavanandro, tsy misy ny fanohanana ny fiteny tahaka ny hanohanana ny fiteny anglisy ofisialy.
Tantaran'ny endri-tsoratra Yorùbá, tsonga avy amin'ny boky Ẹ̀yà Ara Ẹ̀dá Ọmọ Ènìyàn, tanàna sy tanànakely Yorùbá, ireo Yorùbá mpanavao, olo-malaza sns
Be dia be tokoa ny fahalalàna ara-tontolo iainana hita ao amin'ny fitenin-janatany Yorùbá ka tsy azo odiana tsy hita na tsy lazaina, avela na hanjavona araka ny fotoana. Ny ohabolana sy ny tantara fahiny no fahafantarana ny ao anatin'ny teoria sy ny filôzôfian'ny vakoka sy ny fiteny Yorùbá. Tsy maintsy kajiana ireo mari-panondroana tsy manam-paharoa ireo noho ny fahalehibiazana amin'ny fampivelarana izao tontolo izao.
Mba ho ankatoavina eo amin'ny sehatra iraisampirenena ho toy ny fiteny lehibe eto amin'izao tontolo izao ny fiteny Yorùbá, ka mba afa-miteny Yorùbá aho ary misy mpandika teny eo noho eo handika azy amin'ny teny anglisy na amin'ny fiteny hafa. Fanantenako ny hampiasana ny fieny ho fiteny fanaovana kabary sy pedagôjia any an-tsekoly manerana ny faritra atsimo andrefan'i Nizeria, ary mba ho mailaka amin'ny fitenenana, fanoratana ary famakiana ny fiteny ny ankizy Yorùbá tsirairay avy.